Finfinnee: Qabxiilee ijoo Dr.Milkeessaa Miidhagaa BBC waliin taasise keessaa kan fudhatame. | Kichuu
Posted on January 6, 2020 by kichuu_admin
▪Wanti Godina Addaa keessatti ta’aa jiru kuni fedhii siyaasaarraa kan maddeefi galma lakkoofsa jiraattotaa ( demography) jijjiiruu kan kaayyefate ta’uu.
▪“Wanti naannawaa Finfinneetti ta’aa jiru kuni siyaasa lakkoofsa jiraattotaa sabaan akka caalamu gochuuti.
▪Adeemsa keessammoo ‘lafti kun kan eenyuuti?’ kan jedhurratti gaaffiin ka’ee abbummaa dhabamsiisuu, aadaa, afaan duguuganii balleessuu kan kaayyefate,” ta’uu.
▪Gochi kun galma siyaasaa qabaachuufi eenyummaa Oromoo dhabamsiisanii kan saba biraatiin bakka buusuu akka kan kaayyefate ta’uu.
▪“Godina Addaatti qaamni ijaarsa seeran alaa irratti bobba’e hiyyeessa miti. Dureessota ergama siyaasaa sana galmaan gahuuf hojjetanitu qarshii guddaa ramadee qubachiisaa, ijaarsisaa akka jira ta’uu.
▪Ijaarsi kuni erga raawwateen booda namoota rakkatoofi daa’imman qaban itti galchanii yeroo mootumman diigu miidiyaaleerrati iyyuuf akka dhimma itti bahan.
▪Weerara lafaa kanarratti qaamni Mootummaa Naannoo Oromiyaa harka keessaa qabaachuu.
▪Karoora isaanii ‘Finfinneen kan Oromoo miti’ jedhu sana mirkaneessuuf, qubannaa seeran alaatiin baayina lakkoofsa ummata isaanii dabaluudhan, Godina Addaatti manneen barnootaa Afaan Oromootiin akka hin banamne godhanii Amaaressuudhaan lafa fudhachuu.
▪Yoo danda’ameef naannoo Amaaraa Finfinnedhaan waltuqsiisuu kan jedhu Pirojektii jedhu qabu.
~Shira PeePeeti. Badhaadhina nutti faarsaa, lafa Oromoo gurgurachuu warra qophoofte. Abadan hin taatu!
Barreeffama kana WBO zooniilee oromiyaa keessa jiran hunda biraan gahaa! #Amajjii 06_2020
Lixa Oromiyaatti bilbilli Waan dideef filannoo dhabee jaalli WBO giddugalaa naaf bilbiluun ergaa kana WBO Zoonii Lixaaf naaf dhaami jedhee natti hime innis kunooti.
Waraanni humna addaa Oromiyaa jedhamanii dheengadda Gara Lixaaf Kibba Oromiyaatti bobbahan akka Meeshaa Waraanaa Gurguddaa waliin harka kennatan itti yaadamee kan godhame yoo ta’u Uffata Uffatanii jiran sanarra device naannoo WBOn jiru to’atutu jira erga humna guddaa harka kennachiisanii booda humni xiqqaan immoo duubaan bakka WBOn jiru erga bareen booda itti marsa
Turtii ji’a tokkoo keessatti WBO ni dhabamsiifna jette jedhan
Dhaamsa jaalli kun dhaame keessaa Waraana harka kennatte kana uffata isaanii hanga paantiitti osoo hin hafin irraa baasaa ibidda itti qabsiisaa gubaa sana booda meeshaa waraana harka jiru osoo hin hafin qaamasaa hunda sakatta’aa
Namoota harka kennatte kanas ari’a uummatatti haa makamtu yookaan fala tokko itti godhaa jechuun dhaamsa WBO Zoonii Lixaaf Kibbaaf dhaameera !
Share Gochuun ittiin haa gahamu
Share and save the live of OLA and his victory !
Anis yaada Raasoo Dibaabaa kana sirriittan deggara/jechuunkoo ittiin bashannannakaaArii. fannaatiin hojiirra ooluu qaba
“Har’a akka miseensa #Biltsiginnaattin barreessa.
Tajaajila internet balleessuun sochii Riphee Lolaa Baadiyyaa ugguruuf duulli bal’aan gaggeeffamaa jira.Sagantaan lafa kaahamee jiru ariifachiisaa dha. Waan hundaaf yeroon hin jiru; mootummaan shiftoota #Shanee qawwee hidhatanii nagaa biyyaa booressaa jirani hundeen buqqisuuf murteeffatee jira.Obsi mootummaa dhumatee jira.Akkuma bookeetti filiitiin biifamu,shiftoota kana RIB rasaasa itti biifee yeroo gabaabaatti lafarraa haxaaha.Sagantaan kun yeroo gabaabaa keessatti raawwatamuu qaba.Jan 30 darbuu hin qabu.#Halkanii_fi_guyyaa irratti hojjetamuu qaba.
Sana booda Riphee Lolaa Magaalaa (KFO,ABO fi PBO) gara dhabamsiisuutti as galagaluu dha.Kunis ariitiin filannoon dura raawwatamuu qaba.Hadamsuu dha,ukkaamsuu dha,mana hidhaatti guuruu dha, barbaachisaa yoo ta’e ajjeesuu dha.Itiyophiyaa diigamuu jalaa baraaruuf namni miliyoonni tokko yoo dhumateyyuu homaa miti.Yoo barbaachisaa ta’e hanga filannoon darbutti tajaajilli internet guutummaa biyyaa keessatti ni cufama.
Sana booda gufuun hin jiru.Biltsiginnaan filannoo akkuma salphaatti ni injifata,biltsiginnaan Itiyophiyaa ariitiin ni dhugooma.Itiyophiyaan ወደ ቀድሞ ታላቅነቷ ትመለሳለች falaasamni jedhu ni raawwata.Diinotni biltsiginnaa Itiyophiyaatti inaafani hundi ni awwaalamu.”
ODM~Warri OBN Kun Qophiilee ABO dabarsuu eegaluun isaanii Iccitiinsaa Maaloodhaa?, Amajjii, 2020
Gaaffiifi Deebii OBN Paartii #Bilxiginnaafi KFO f dhiyeesse ykn falmisiise har’an dhaggeeffadhe. Jalqabbii bayeessa eegale miidiyaan kun.
Taajjabbiirraa duras dhugaa eegdu mitiiree? Dhugaadha gurbattii ishee #Baartii Bilxiginnaatu yaada injifataa dhiyeesse. Bifa kanaan deemnaan #Baartiin Bilxiginnaa utuu guyyaan filannoo hingahiinuu injifateera. Baqqalaan nama falmii danda’udhan se’aa ture; baayyee gadi bu’aadha. #KFON nama hinqabu.
Obbo Gaazexeessaa OBN, Mee Bilxiginnaafi ABO naaf dhiyeessi. #ABOnis akka #KFO kana gururuiya taanaan gaafa sanaa ka’een #Taajjabbii dhaaba😂😂👇
Soba kan jette kottu nafalmi.
Korri Dubartootaa fi Shamarran Oromoo ABOn Qopheessame Finfinneetti Geggeessame